Fepetra Noraisin’i Shina Hanenjehana Ireo Vahiny Mpitsikilo? Valisoa Goavana (Volabe) Ho An’ireo Izay Manome Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Fepetra Noraisin'i Shina Hanenjehana Ireo Vahiny Mpitsikilo? Valisoa Goavana (Volabe) Ho An'ireo Izay Manome Vaovao
Tian'ny manampahefana ny "hanangana rindrim-by iadiana amin'ny mpitsikilo."
Voadika ny 14 Avrily 2017 14:31 GMT
Biraom-piarovana Nasionaly ao Shina namoaka lahatsary mampitandrina ny olona tsy ho tratran'ny mpitsikilo. Pikantsary.
Manome valisoa volabe ho an'izay mitory ireo vahiny mpitsikilo ny Biraom-piarovana Nasionaly ao Shina
Ny laharana an-tariby ao amin'ny firenena, #12339 dia azo ampiasain'ny olom-pirenena itoriana ireo ahiahiana ho manao fitsikilovana nanomboka tamin'ny Novambra 2015. Saingy nanomboka tamin'ny 15 Aprily, noho ny “Fepetra Hanome Valisoa ho an'izay Olom-pirenena Mitory ireo Mitarika Fitsikilovana”, hahazo vola mitentina hatramin'ny 500.000 yuan, na eo amin'ny 73.000 dolara Amerikana ny olom-pirenena, raha nilaina ny tatitra omen'izy ireo.
Araka ny lahatsoratra tao amin'ny Beijing Morning Post, ny rafitra fanomezam-balisoa dia midika fananganana “rindrim-by iadiana amin'ny fitsikilovana“:
Vokatry ny fanitarana ny politika misokatra ato amin'ny firenentsika, nitombo haingana ny fifandraisana tamin'ireo vahiny. Nitombo haingana ny isan'ireo olona miditra sy mivoaka ny firenena. Niditra tamin'ny politikan'ny firenentsika ireo sampan-draharaha Vahiny misahana ny Fitsikilovana sy ny hery hafa feno fankahalana, mitarika fisaraham-bazana sy fikorontanana, mangalatra tsiambaratelo sy manao hetsika fitsikilovana.
Fanampin'izany, misy ireo olona sasany mitady tombontsoa manokana izay nivarotra ny tombontsoam-pirenena tamin'ireo sampam-pitsikilovana vahiny. Toerana laharana voalohany itoeran'ny sampan-draharaha Vahiny misahana ny fitsikilovana sy ny hery hafa mpankahala i Beijing, noho izy renivohtira, mba hikarakarana hetsika ahafahan'izy ireo miditra, manakorontana sy mampisaraka, mamotika sy mangalatra tsiambaratelo.
Noho izany toe-javatra izany, misy ny filàna maika hanaovana fanadihadiana iadiana amin'ny fitsikilovana mba handraisana fepetra vaovao amin'ny alalan'ny fanentanana ny vahoaka, manentana ny vahoaka sy mandrisika azy ireo mba hiaro ny filaminam-pirenena sy hanangana rindrimby iadiana amin'ny fitsikilovana.
Manoritra ny fepetra vaovao fa tsy ho tononina ny mombamomba ireo manome vaovao ary hiharan'ny lamandy ireo tatitra misy fikasan-dratsy.
Namoaka lahatsary tamin'ny fampahalalam-baovao isan-karazany ihany koa ny Biraom-piarovana Nasionaly, mampianatra ny olom-pirenena mikasika izay haraha-maso sy manazava ny antsipirian'ny rafitra fanomezam-balisoa. Nahasarika mpijery maherin'ny 450 tapitrisa tao anatin'ny iray andro ny lahatsary nampiantranoana tao amin'ny kaonty media sosialy Miaopai an'ny CCTv (Fahitalavitra Foibe Shina).
Nanomboka nanoro hevitra ho an'ny vahoakan'i Beijing ireo tompon'andraikitra amin'ny fampielezan-kevitra mba hitady ireo vahiny mpitsikilo tamin'ny herintaona. Mampitandrina ny vehivavy Shinoa mba tsy ho voasariky ny lehilahy vahiny tsy manana anton-dia mazava ny iray tamin'ireo afisy sarimiaina navoakan'izy ireo, mitondra ny lohanteny hoe «Fitiavana Mampidi-doza».
Araka ny lalàna iadiana amin'ny fitsikilovana nolaniana tamin'ny taona 2014 sy ny lalànan'ny fitantanana ONG vahiny nolaniana tamin'ny taona 2016, azo sokajiana ho hetsika fitsikilovana ireo fikambanana mahazo famatsiam-bola vahiny tsy nahazo fankatoavam-panjakana mialoha.
Tao anatin'ny roa taona, nosamborina ireo vahiny maromaro noho izy ireo “lazaina fa loza mitatao” ho an'ny filaminam-pirenena. Tamin'ny Janoary 2016, voaraoka tao Shina i Peter Dahlin, Soedoà mpiaro ny zon'olombelona rehefa nogadraina 23 andro. Ny tranga vao haingana indrindra dia ny fisamborana ilay Taiwaney, mpikatroka ny zon'olombelona, Lee Ming-cheh, sy ny fanagadrana ilay prefesora Shinoa monina ao Aostralia, Feng Chongyi.
Anisan'ireo ao anatin'ny sehatra media sosialy malaza nidera ny rafitra fanomezam-balisoa ny Ligin'ny Tanora Komonista Shina, nidera izany tamin'ny hira rap. Naneho hevitra momba ny lahatsary ireo mpanjohy ny Ligy ao amin'ny Weibo tamin'ny fanondroana ireo fanehoan-kevitra antserasera miiba avy amin'ireo mpitari-kevitra liberaly ao Shina ho fihetsika fitsikilovana. Ireto ambany ireto ny sasany tamin'ireo fanehoan-kevitra be mpitia indrindra tao anatin'ny fanehoan-kevitra tamin'ny lahatsary:
«Moanina tsy fotsy»: an'aliny fara fahakeliny ireo [mpitsikilo] ao amin'ny Weibo. Ao Japana, Etazonia sy Korea, mampiasa ny karazana toerana rehetra izy ireo ividianana azy ireo mba ahafahany mitarika amboaram-peo manevateva ireo maherifon'ny firenena, ary mandrisika fanavakavahana ara-paritra, ara-poko sy arak'asa. Manararaotra ny vaovao ratsy mba hamoronana tsaho sy hanakorontanana vahoaka ho fanomezana endrika korontana ho an'ny firenena. Mavitrika izy ireo amin'izany rehetra izany.
“Mijery ny orana vao maraimbe”: tsy voatery ireo mitsikilo no tena mpitsikilo. Fa mety ireo manaparitaka hery ratsy manana fahatsapana ho marina, ireo mandrisika fihetsika tafahoatra amin'ny famoahana ny marina.
Nanomboka nanonona ny anaran'ireo manam-pahaizana ho mpitsikilo ireo mpanohana ny Ligin'ny tanora sasany:
“Mandarin zhoutou 12345″: Tateriko eto fa mpitsikilon'i Etazonia i Wang Xuming, talen'ny Gazety momba ny Teny sy ny Kolontsaina ao amin'ny Biraon'ny Fampianarana; Yuan Tengfei [mpampianatra tantara sady bilaogera malaza]; He Weifang [mpampianatra lalàna]; ary Mao Yushi [mpahay toekarena malaza].
“Su-ma-li-qing rua”: Yuan Tengfei ary ireo antsoina ho manampahaizana malaza, manohy mamazivazy ny firenena sy ny governemanta izy ireo ary manohy midera ny demokrasian'ny tandrefana sy ny traikefan'i Taiwan ho lala-marina. Ahoana no hitoriana izany?
Tamin'ny adihevitra hafa tao amin'ny Weibo, nitsikera kokoa ny fanehoan-kevitra:
Mbola manam-potoana hiresahana momba ny mpitsikilo. Mifantoha amin'ny kolikoly aloha na lasa manaraka ny dian'ny Taranam-panjakana Qing ny firenena. Raha tsy mikarakara ny tranonao manokana ianao, hirodana izany.
Vakio ny fanehoan-kevitra. Nanomboka tamin'ny fiampangana sy fifandroritana ny Revolisiona Ara-kolontsaina .
Raha mendrika fisamborana ny firesahana ny hevitry ny hafa ao amin'ny Weibo, ho firy ny isan'ny olona hiafara any am-ponja? Ratsy ve ny fanehoan-kevitra malalaka? Karazana olona manao ahoana no te hanagadra ireo olona manana hevitra tsy mitovy amin'ny azy ireo?